Codsiga Diesel Generator Codsiga Hotel,Codsiga Saldhigga Xarunta
Mid kasta qalabka korontada codsiga waxaa lagu dhejin karaa Automatic Switch Switch (ATS) si ay u sameeyaan habka in koronto-dhaliye si toos ah ayaa loo gubayaa marka korontadu ay ku guuldareysato, koronto-dhaliyuhu wuu xirayaa marka ceelasha korontada soo kabashada.
Codsiga Saldhigga Istuudiyaha
Marka awoodda caanaha bixinta ayaa ku fashilantay (Iskuduwaha jarjarista ama hoos u dhaca), qalabka korontada wuxuu socon doonaa oo bixin doonaa Awoodda istaagida ee saldhigga saldhigga si toos ah nidaamka ATS. Nidaamka oo dhan waa la kormeeri karaa oo koontarooli karaa kombiyuutarka ama taleefanka gacanta.
Codsiga Goobta dhismaha
Marka ay jirto maya tamarta korontada ku shaqeysa ama caanaha caanaha ayaa ku fashilantay, generato guuro r wuxuu u shaqeyn doonaa awoodda la qiimeeyo si ay u taageeraan qaadista dhismaha.
Haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah oo gaabis ah (oo ay ku jiraan naaquska qadar yar / sare iyo hoos u dhac / hoos u dhac), koronto-dhaliyaha isku-dhafan iyada oo koontoroolka tooska ah iyo ATS ay si toos ah u bilaabi doonaan oo ay u wareejin doonaan awood u leh cusbitalka waqti aan la joogin. Injineerka korantada ayaa sidoo kale awoodi kara Isku-dubbaridaha koronto-dhaliyaha lagu sameeyo moobilka.
Mid kasta oo kasta hudheelku waa inuu dejiyaa a genset sida tamarta taagan haddii korontadu ay ku guul daraysato dammaanad qaadidda nidaamka dab-demiska, nidaamka kor loo qaado, iyo nidaamka hawo-qabadka.
Arjiga Suuqa ama Arjiga Shidaalka
The koronto-dhaliye waa mid lagama maarmaan u ah suuq kasta oo suuq ah iyo warshad si ay u taageeraan si joogto ah u socodka marka ay dhacdo in cilladuhu ay dhacaan.
Dhowr nooc koronto-dhaliyaha waa la ogyahay si loola shaqeeyo iyada oo la adeegsanayo gensets paralleling system oo awood u leh a tuulo. Qiyaasta isticmaalka saxda ah ee korantada, nidaamka isbarbar dhiga ayaa go'aamin doona inta badan gensets waa in la xiro ama si toos ah loo xiraa.
Xuquuqda daabacaadda © 2015-2021 Fuzhou FMW Power Co., Ltd..Dhamaan xuquuqda la keydiyay.